I-GPS056D - Inkinobho ye-OMG Panic Button SOS Emergency GPS Tracker yabantu abadala abane-Dementia - Izixazululo ze-OMG
4G Ukuxhumana - Sekela amabhendi ahlukahlukene e-4G, izobuyela emuva ku-3G / 2G uma kungekho ukumbozwa kwe-4G.
Ukushaja okungenantambo - Ishaja ye-QI inikeza ukushaja okusheshayo nokusebenziseka kalula.
Ukushaja Isisekelo (Okubandakanya) - Umane ulahle eyakho IGPS056D ungene kusisekelo sokushaja bese uyahamba.
I-SOS Alarm - Ithumela i-alamu ye-SOS ngesikhathi sangempela nemininingwane yendawo ephelele yedivayisi uma umuntu osengozini ecindezela inkinobho ye-SOS / panic. ☆ Ukuhamba kwezwi Ukukwazisa isikhathi nesimo sedivayisi yakho, i-Ex: i-alamu yakho yenziwe yasebenza. Kushayelwa inombolo yokuxhumana 1. Manje isikhathi 11:45.
Ukushaya ucingo ngezindlela ezimbili - Sebenzisa ukubiza ngezindlela ezimbili ukubiza obathandayo nganoma yisiphi isikhathi, bangakushayela ngisho nangokuthinta inkinobho.
I-alamu Yokuthola Ukuwa - Yaziswa uma kungenzeka ukuwa noma ukushayisana kwenzeke. Izaziso ezisheshayo zikuvumela ukuba usabele ngokushesha.
Setha ama-Geofence nezixwayiso - Setha ama-Geofence amaningi bese uthola izexwayiso njengoba idivayisi ingena noma iphuma endaweni ethile.
4 Ukuthola Ubuchwepheshe - Ukulandelelwa kwesikhathi sangempela, kufika kubuchwepheshe bendawo engu-4: i-GPS, i-WIFI, i-Bluetooth ne-LBS.
I-GPS - Ukuxhaswa kwe-GPS kusebenza kusetshenziswa inethiwekhi yama-satellite ukukhomba ngokushesha indawo yakho. Ngokushesha kune-GPS ejwayelekile, i-A-GPS isebenza ngokushesha, okusho ukuthi usizo lufika kuwe masinyane. ☆ Gqoka okungangeni manzi eshaweni- Yiwa eshaweni- Thola usizo ngokushesha.
Akukho Ukunyakaza kokunyakaza nokunyakaza - Inzwa yokunyakaza isebenzisa ubuchwepheshe obuningi ukuthola ukunyakaza noma ukunganyakazi. Uma inzwa ibangelwa, i-alamu ithunyelwa kumuntu oxhumana naye noma esikhungweni sokuqapha ngokushesha.
Ukuxhumana kwe-Bluetooth 5.0 - Xhuma kusisekelo sakho sokushaja ukuthola indawo yangaphakathi.
Usebenza kanjani umtshina wokuwa
Idivayisi yokuthola ukuwa iqukethe inzwa ye-accelerometer ye-3D elinganisa ukunyakaza kuzo zonke izinkomba. Uma ucingo selukutholile ukuwa luthumela umlayezo wombhalo oya ezinombolweni zocingo ezifika kwezilishumi ezazisa ukuthi kunesimo esiphuthumayo bese lushayela ngokuzenzakalelayo inombolo yokuqala egciniwe. Uma lolu cingo lungaphendulwa, luzokhetha ngokuzenzakalela inombolo elandelayo nokunye. Uma kungekho muntu oqoqayo, umtshina uyayiphinda inqubo ngemuva kwemizuzu engu-5 kuze kube yilapho othile ephendula noma inkinobho ye-SOS icindezelwe .. Uma othile enezinombolo zocingo eyodwa ethatha, ungakhuluma ngokujwayelekile phezu komtshina, njengasocingweni olujwayelekile. Ukutholwa kokuwa kungacishwa. Idivayisi ithola ukuwa ngokuya ngemibandela eminingi. Ibhalisa umthelela kusetshenziswa i-engeli yokudipha ngemuva kokuthi ibisendaweni evundlile imizuzwana eyi-10. Ukutholwa okuhlanganisiwe kokuwa kunamazinga e-9 ahlukene wezwela ongawakhetha ukuvikela ama-alamu angamanga.
Kuze kube amahora angu-120
Ikhadi le-Nano SIM
inzwa yokunyakaza nokudlidliza
Ukubuka okuphelele kwe-1761 Ukubuka kwe-2 Namuhla